१९ मंसिर, काठमाडौं । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। कलेज परिसरबाटै बिहीबार ९ जना विद्यार्थी पक्राउ परेका हुन्। एमबीबीएस परीक्षा बहिस्कार गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। केहीबेर परीक्षा हलमा बसेर विद्यार्थीहरु बाहिर निस्केरका थिए। पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई
गत असारदेखि फैलिएको डेंगीको प्रकोपले जनमानसमा अहिले पनि त्रास छ। साउनदेखि अहिलेसम्म ७ हजार ३ सय ७० जनामा डेंगी संक्रमण भइसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ। यो रोगबाट बच्न लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। इडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण
ओठको शृंगारमा फेसन
शृंगारलाई नारीको गहनाको रूपमा लिइन्छ। शृंगार मिलेन भने मानिसको सुन्दरता नै फिक्का हुन्छ। त्यसकारण शृंगार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सौन्दर्यकर्मीको सुझाव छ। शृंगार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने एक अंग हो, ओठ। सुन्दरताका लागि ओठको शृंगार गर्न आवश्यक रहेको सौन्दर्यकर्मी बताउँछन्। ओठको प्रकार
कुनै बेला एचआइभी/एड्स भन्नेबित्तिकै ज्यानै जाने रोग बुझिन्थ्यो। कारण, यस रोगका लागि औषधि थिएन। पछिल्लो समय औषधिको पहुँचका कारण एचआइभी संक्रमितलाई पनि सामान्य रूपमा लिइन्छ। एचआइभी कस्तो रोग हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? लगायत विषयमा प्रस्तुत छ, नागरिककर्मी पवित्रा